Ogaden News Agency (ONA) – JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan
JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan
Posted by ONA Admin	/ September 16, 2014
Barnaamijka TPLF/Itobiya aaminsan tahay
Somaliya siday gacanta ugu dhigtay
ONLF siday ugu suurtagashay inay looltan la gasho Itobiya
Iskudayga Itobiya inay ONLF kula dagaalanto habkay kula dagaalantay Somali
Odhaahdaa ah (ONLF waa ururka kali ah ee Somali leedahay ee ka madaxbanaan Itobiy), waxaa igu yidhi Siyaasi Somali ah oo aanay muhiim ahayn hadda in aan sheego magaciisa, markuu daawaday Shirweynihii jaaliyadaha ee London.
Ururka TPLF markuu cagaha la helay xukunka Itobiya wuxuu dajistay buu yidhi siyaasad ku dhisan inuu noqdo xisbi ahaan midka kali ahee amarkiisu uu ka socdo Geeska Afrika. Ka dibna, Itobiya oo TPLF ay xukunto uu gaadho xukunkeeda Badaha Hindiya iyo Badda Cas, nufuudkeedana (Influence) uu gaadho gabi ahaan Afrikada ka hooseeya khadka Saxaraha (Sub Sahara Africa). Waxyaaba badan ayaan uga hirgalay ayuu yidhi siyaasigan aadka ula socda arimaha Geeska Afrika gaar ahaan.
Haduu ahaa qorshe lasii dajiyay iyo hadii kaleba, dhiigyacabkii Meles Zenawi iyo kooxda TPLF waxay soo galeen Adisababa oo xukunka ay qabsadeen ama loo dhiibay markuu Maxamad Siyaad Barre ka cararay Villa Somaliya oy burburtay Xukuumadii iyo qaranimadii Somaliya. Haduu ahaa qorshe lasii dajiyay iyo hadii kaleba, burburkii ku dhacay umadda Somaliyeed iyo dagaalkii sokeeye eek u habsaday oo ilaa iyo maantadan socda wuxuu siiyay Kooxdan TPLF fursad ay ku fuliyaan qorshahaa ay dajisteen ama loo dajiyay oo loogu talagalay inay fuliyaan. Arimaha shakiga ku abuuri kara qofkasta oo Somali ah oo danaynaya soo celinta qaranimadii umadda Somaliyeed oo u muujin kara in qorshehan loo dajiyay Itobiya waxaa ka mid ah, Siyaasi kasta oo Somaliya wax ka noqda waxay dawladaha Reer-Galbeedka ee arimaha Somaliya iyo Geeska Afrika daneeya ay kula dardaarmayaan inuu danaha Itobiya ilaaliyo oo aanu ka horimaanin, haduu doonayo inuu sii haysto jagada. Siyaabo kala duwan ayaana loo dareensiinayaa ay ka mid tahay; in la yidhaahdo Itobiya makala hadashay arintan markuu barnaamij quseeya Somaliya u keeno.
Oday aqoon iyo indheer-garadnimoba isku darsaday oo reer Hargaysa ah oon ku kulanay meel lawada fadhiyo oo arimaha Somali lagu soo qaaday, ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisa; Waxaan ka imid fasax, waxaanan idiin sheegayaa maanta Itobiya ayaa dhab ahaan u xukunta Somaliya gees ilaa gees. Dakadda Berbera waxaa ka baxa maalin walba ugu yaraan 60 tareela (Trailers), oo nin ama naag Tigree ah uu shirka u fadhiyo oo aan lala hadli karin dadka saaran shiraacana aan laga rogi karin. Wuxuu ka sheekeeyay nimankii Itobiyaanka ahaa ee lagu qabtay xadka Togwajaale oo uu yidhi waxay wadeen cajalado ay kasoo duubeen gabi ahaan Somaliya oo asraar ah iyo khariidado ay ka sahqaynayeen muddo. Kuwii qabtay ilaa hadda waa xidhan yihiin, waxayna noqotay in wasiiro loo diro Itobiya ka raali galiya arintii dhacday oo lagu maslaxo in lasoo xidho gabi ahaan shaqaalihii joogay halkaa.
Waxay arintaasi fursad u siisay Itobiya inuusan ka hirgalin Somaliya xisbi ama urur siyaasi ah oo Itobiya aanay iyadu u abuurin oo hogaankiisa u dhiibin dad ay usoo xulatay oo aaminsan in aanay waxba qabsan karin Itobiya la’aanteed. Halmar ayay dhacday arintaasi, waa markii la sameeyay Maxkamadahii Sharciga ee noqday xoog siyaasi iyo ciidanba leh ee loo bixiyay Islamic Courts Union (ICO) oo ka madaxbanaan Itobiya. Arintaas oo aanay Itobiya filaynin, wuxuu noqday mashruuc ka weyn inay ka hortagto kaligeed. Waxayna noqotay in loosoo gurmado. Waxaa lagu mideeyay Dagaal-oogayaashii (War Lords) ay Itobiya gacansaarka la lahayd urur loo bixiyay Isbaheysiga Ladagaalanka Argagaxisadda (Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism (ARPCT), kuwaasoo si dhibyar ay Maxkamadihii uga adkaadeen. Arintaa markay dhacday waa iyadii Itobiya oo lasoo hubeeyay ay soo galeen Somaliya oy qabsadeen Muqadishu markii ugu horeysay taariikhda Itobiya. Sababta u sahashay itobiya inay qabsato caasimadii Somaliya ma’ahayn awood ciidan ee waxay ahayd siyaasadda ay ilaa maanta ku maamusho kuna xukunto jinsigii Somali la odhan jiray. Siyaasadaa oo ah midii caanka ahayd ee gumaysiga – Qaybi oo Xukun (Divide and Rule), Somalidana ay ugu maah-maahaan geedka yidhi – Gudunay ima aadan goyseen hadaanu badhkay kugu jirin – Itobiya waxay ku guulaysatay inay marwalba hesho qaar Somali ah oy ku jabiso kuwa kasoo horjeeda. Oo waliba raqiis ah, oo laga yaabo inuusan kaga bixin kharash xoogan sida midka Mareykanka uu ku bixiyo ciidamada uu dalalka kale ka dhiso. Waxaa Itobiya garab ordayay Cabdulaahi Yusuf oo sheeganayay M/weyne lagu soo doortay Kenya iyo ciidan uu wato. Sidoo kale Dagaal-oogayaashii oo soo noolaaday iyo boqolaal kale oo kala yimid Ogadenya ama kasoo raacay dhexda. Sidaa ayaa lagu jabiyay xoogagii Maxaakimta iyo kuwii raacsanaa, waxayna galeen ciidankii Itobiya Muqdisho, iyagoo xarun ka dhigtay Madaxtooyada iyo rugtii Saraakiisha Ciidankii Somaliya. Wixii ka dambeeyay waa lawada ogsoonyahay. Inay Sheekh Shariif iyo koox la socota aadeen Asmara oo halkaa xarun ka dhigteen iyagoo samaystay urur ay u bixiyeen Isbahaysiga Dibu Xoreynta Somaliya (Alliance for the Re-Liberation of Somalia), kaasoo aan sii waarin kadib markii loo balan qaaday Sh. Shariif inuu M/weyne ka noqdo Somaliya haduu la heshiiyo Itobiya. Sidaa ayayn u dhacday.
Itobiya waxay ka faa’idaysatay Waaya-aragnimo dhismihii Maxaakimta iyo wixii ka dambeeyay. Kaasoo ah in aanay fursad siinin inuu abuurmo urur Somali ah oo aanay ogayn kana madaxbanaan Itobiya. Sidoo kale, in aanau ka dhex muuqanin Somaliya, qof Somalinimo aaminsan oo doonaya inuu soo nooleeyo dawlad Somaliyeed oo midaysan oo ka madaxbanaan Itobiya. Haduu qof sidaa aaminsan yimaado Somaliya oo la ogaadana in la dilo ama laga eryo dalka. Sidii ku dhacday aqoonyahano iyo culumaa udiin badan.
Arintaa waxaa ka baxsaday oo kali ah Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya oo ku guulaysatay inay joogto oy ka halgan hubaysan ka wado Ogadenya oo looltan kula gasho Itobiya Geeska Afrika. Siday arintaa ugu suurtagashay ONLF. Arintanna waxay ka muuqataa xuska 30Guurada Ururka iyo Shirweynihii Jaaliyadaha ee London.
Siday arintaa ugu suurtagashay ONLF.